Misedra olana… : iharan’ny tsikera mivaivay ny governemanta | NewsMada
Misedra olana… : iharan’ny tsikera mivaivay ny governemanta
Par Taratra sur 25/04/2016
Tsy mbola mifarana eo fa tratry ny tsikera mivaivay avy amin’ny sehatra samihafa, toy ny mpanao politika sy ny fiarahamonim-pirenena, eny fa ny ny olon-tsotra aza ny governemanta vaovao, « tonta navadibadika ».
Voaporofo izany amin’ny fihanaky ny kolikoly ary hita eny anivon’ny tranonkalam-pifandraisana sy ny haino aman-jery samihafa eny, ka maharesy lahatra ny rehetra fa tsy misy zavatra mandeha amin’ny laoniny intsony eto amin’ny firenena.
Anisan’ny ohatra amin’izany ny tsy famalian’ny tompon’andraikitra voakasika amin’ireny raharaha maloto ireny raha tena tsy mitombina tokoa, ka hitondrana ny raharaha eny anivon’ny fitsarana. Valin-kafatra amin’ny hanamboarana ny lalàna momba ny serasera sy ny fifandraisana no hany atao… Mba hifehezana sy hanindriana amin’ny fomba hafa ka handraisana fepetra indray ny mpanao gazety ? Ho voatohintohina ny fahafahana sy ny fahalalahana mamoaka ny vaovao misy sy ny marina…
Ho tonga amin’ny tsy fitoniana politika isika
Manampy ireo ny fitakiana ara-tsosialy samihafa mahazo laka sy vahana amin’izao fotoana izao. Midika sy manaporofo ireny fa tsy mbola ahita-mitsinjo ny ho avin’ny mpiasa, mpamokatra, ny mpiasam-panjakana… Tena kivy avokoa ny rehetra manoloana izao toe-draharaha politika izao.
Mbola hanampy trotraka ireo ny mety hiseho aorian’ny hetsika ataon’ny mpiasa ny 1 mey izao. Eo koa ny hidirana amin’ny fivoriana ara-potoan’ireo parlemantera, satria tsy vitavita ho azy iny nanesorana sy nanendrena ny praiminisitra vaovao iny. Ho tonga any amin’ny tsy fitoniana politika avokoa izany rehetra izany. Miseho avokoa anefa ireo, mialoha ny hahatongavan’ny iraky ny mpamatsy vola (FMI) eto amintsika, hijery akaiky ny fivoaran’ny fanarahantsika ireo fepetra napetrany, mialoha ny hivoahan’ny vola avy amin’izy ireo. Ohatra amin’ny fepetra, ny lalàna vaovao momba ny satan’ny banky foibe na koa ny hampitsaharana ny fanohanana (subvention) ny Jirama…
Mpanohitra tsy azo antoka…
Etsy andaniny, tsy antenaina hitondra fampandrosoana io governemanta io. Mazava izao ny azy ireo fa ny hanao ampihimamba tanteraka handrombaka ny fandresana amin’ny fifidianana ho avy. Na fifidianana hatao mialoha ny fotoana izany na ho amin’ny taona 2018.
Ireo ambara sy mitonona ho mpanohitra indray , vaky sy misaraka sady tsy azo antoka na itokisana. Tafiditra amin’ny raharaha kolikoly aza ny sasany…Ireo fiarahamonim-pirenena sy ny any anaty tranonkalam-pifandraisana no hany mba mampiaka-peo… Midika izany, fa handeha tsy voizina sy ho tonga amin’ny 2018 ihany izao fitondrana izao… Hafa indray raha tsy hoe hiainga eny an-dalambe no hiteny ?